टीका लगाएर २ हजार दे, नत्र... !
जोर्डेनियन्सलाई उठाएर बिहानको घाम इजरायली शहर तिबेरियस आइपुगेको छ । यो न्यानो छ । डिसेम्बरलाई कोशेली चढाउन नोभेम्बरले चिसो बढाउँदै छ । एक महिना अघिसम्म घरका छाया खोज्दै सडकपेटीमा हिँड्नेहरू छतमा निस्केर कलिलो घामलाई पिठ्यूँ देखाइरहेका छन् । उसैगरी ठडिएका ल्यामपोस्टहरूलाई चिसो तातोको कुनै पर्वाह छैन । यहूदीका चार पाङ्ग्रे सवारी सडकमा निस्किसकेका छन् । बेत्केनिसेत (मन्दिर)मा दत्ती (कट्टर यहूदी)हरू सेफेर तोरा (यहुदीको धार्मिक ग्रन्थ) पढ्न थालिसकेका छन् ।
‘बेलुका धेरै भएछ’, देवले आङ तान्यो । र, अब्बासी लिँदै मुख छेउमा लगेर चुट्की बजायो, ‘छतमै सुतिएछ, छिटो उठ्, ओरेन आयो भने फाइन हान्छ ।’
ओरेन डेभिड सी अफ ग्लालीलीस्थित किन्नरेट कलेजका प्रोग्राम डाइरेक्टर हुन् । नेपाली विद्यार्थीको गतिविधि रेखदेख गर्ने जिम्मा उनकै काँधमा छ । निकै स्ट्रिक्ट छन् उनी । त्यसैले अक्सर साथीहरू डराउँछन् ।
नेक्स्ट लाइट निकालेर देवले मतिर इसारा गर्‍यो । ‘कति पटक भन्नु हौ तँलाई ? यो केटीले खाने चुरोट लिएर म भएठाउँ नआइज !’, म झर्किएँ । बिहानैदेखि मन उराठ जो छ ।
‘स्याललाई अङ्गुर अमिलो भनेको यही हो’, देव गोल्डस्टार बियरका रित्ता बोतल उठाउन थाल्यो, ‘केटीले खाने चुरोटको खिल्लीबाट चाहिँ धुलोको धुवाँ आउँछ र ?’, ऊ रोकिनेवाला छैन ।
छरपस्ट बोतल सँगालेर भुइँ पुछ्न थाल्यो । लाग्छ, उसलाई आजको दिनको कुनै मतलब छैन । र, शायदै थाहा छ, आज भाइटीका हो ।
तर, म ओइलाएको छु ।
उठेर तिबेरियसको काखमा छचल्किरहेको समुन्द्रलाई नियालेँ । कति शान्त छ त्यो । अरु बेला त्यसलाई शान्त देख्दा आफूलाई पनि शान्त ठान्ने मलाई आज त्यसको शान्ति देखेर बेचैन भइरहेको छ । शायद डाहा । म बेचैन हुँदा त्यो किन शान्त छ ? एकाबिहानै यी यहूदी आइमाईहरू समुन्द्रको काखमा किन नाङ्गिदै छन् ? आज मनमा उकुसमुकुस ज्यादा नै छ ।
‘ओए देव, ह्याङ बढ्ता भो, गोल्डस्टार छ भने ले न एक क्यान !’ ऊ सुनेको नसुन्यै भयो ।
आफैँ गएर फ्रिजबाट एक क्यान लिएर आएँ । गोजीबाट एल एण्ड ब्लू सिगरेटको प्याकेट निकालेर एक खिल्ली ओठमा च्यापेँ ।
‘पख्, ड्याडीलाई भन्दिन्छु !’
हत्तपत्त सिगरेटको खिल्ली र बियरको क्यान छतबाट तल फ्याँकेँ ।
‘ए जे मेसुगा.. तुम्ताम् जे !’ तलबाट झन् कडा आवाज आयो । जर्मन अमेलियाले हिब्रुमा गाली गरी, ‘कस्तो खुस्केको ?’ नगरोस् पनि किन, आज पनि मैले उसको गमला फोहोर गरिदिएको थिएँ । अब उसले घरबेटी इजिकलाई पोल लगाउने छे । इजिकले मलाई थर्काउँँदै भन्नेछ, 'स्पोकपर्सन नै यस्तो भएपछि अरुले के राम्रो काम गरुन् ।' एकछिनपछि फेरि मलाई धाप मार्दै भन्नेछ, 'चील ब्रो चील ।' ह्या, इजिक त मेरो साथीजस्तै हो। ओरेनसम्मचाहिँँ कुुुुरा नपुुुगेकैै राम्रो । मैले कुनै प्रतिक्रिया दिइनँँ ।
‘पख् ड्याडीलाई भन्दिन्छु !’
कुनै गल्ती गर्दा मेरी बहिनीले मलाई दिने चेतावनी, मैले अनायासै अनुभूत गरेँछु । आज मलाई मेरी बहिनीको खुब याद आइरहेको छ ।
यो पहिलो वर्ष हो, जहाँ बहिनीले मेरो कपाल सम्हाल्दै सात रङको बाङ्गो टीका लगाइदिन पाउने छैन । कलशभरिको फूलपानीले मेरा लागि सुरक्षा घेरा कोर्न पाउने छैन । हरेक वर्षझैँ हाम्रो अगाडि बसेर मम्मीले बहिनीलाई सिकाउँदै भन्नुहुने छैन, ‘हेर त, यो वर्ष पनि टीका बाङ्गो नै लगाइदिई !’
यी सबै हेरेर ड्याड मुस्कुराउँदै बसेको मैले पनि देख्न पाउने छैन । बहिनीले अगाडि राखिदिएको सरदाम सँगालेर एक हप्तासम्म हामी दाजुबहिनीले खान पाउने छैनौँ ।
वास्तवमा दाजुबहिनी र दिदीभाइबीचको सम्बन्ध निकै अलग र अनौठो हुने रहेछ । यो सम्बन्धमा रिस, ईर्ष्या, साथ, प्रेमको सम्मिश्रण हुन्छ । धेरैले प्रेमको अर्को नाम बहिनी हो पनि भन्छन् । तर, म यसको परिभाषा निराला देख्छु ।
सँगै हुँदा लडाइँ झगडा गरिरहने हामी दाजुबहिनी आज हजारौँ किलोमिटर टाढा हुँदा एकअर्काको अभावमा तड्पिएका छौँ । शायद झगडा गर्न, सताउन, एकअर्काको गल्ती अभिभावकलाई पोल लगाउन अनि एकअर्काको साथ निभाउन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, बहिनीसँगको झगडाबिना जिन्दगी अधुरोअपूरो लाग्दोरहेछ ।
मभन्दा सात वर्ष कान्छी हो मेरी बहिनी । यसको फाइदा उसले खुबै उठाई । ड्याडको काखमा बसेर मेरो बारेमा खुब कुरा लगाउँथी, ‘डेडी, डेडी ! दादा आज दिनभरि गुच्चा खेलेर आ’को’, ‘यसले आज स्कुलको साथीसँग फाइट गरेको’, ‘तपाईं घरमा नहुँदा मलाई कुटेको’, इत्यादि । ऊ सानो शब्द भन्दा पनि दुई पटक सास फेर्थी, त्यसरी नै भए पनि कुराचाहिँ लगाएरै छाड्थी ।
अलिक ठूलो भएपछि, ‘दादा चुरोट खाने केटाहरूसँग हिँड्छ’, ‘मेरो साथीहरूलाई जिस्काउँछ, फूल दिन्छ, पोस्टकार्ड पठाउँछ’, ‘मलाई पठाइदिएको टिफिन आधा त बाटोमै खाइदिन्छ’, ‘आउँदा मलाई छोडेर आउँछ ।’
मैले ठूलो थालमा भात खाएको देखेर ऊ भातै खान्न थिई । उसको गुनासो हुन्थ्यो, ‘मलाईचाहिँ किन सानो थालमा दिएको ?’
बिहान मम्मीले चिया दिँदा चार कपमध्ये पहिलो उसैले रोज्नुपर्ने । ड्याडमम्मीसँग हिँड्दा मैले ड्याडको हात समातेको भए, उसलाई पनि ड्याडकै हात, त्यो पनि मैले समातेकै हात समाउनुपर्ने । मम्मीको हात समातेको भए पनि त्यसै गर्थी ।
साना टोलीले भैलो खेलेर पैसा बाँड्थे । त्यसबाट भागमा परेको बहिनीको पैसा गनिदिने बहानामा आधाजति मै कुम्लाइदिन्थेँ । रोटी केटाहरूलाई बाँडिदिन्थेँ । हातमा बाँकी रहेको पैसा बाटोमा फ्याँकेर ऊ रुन्थी ।
मामाघर जाँदा कसैले नदेख्ने गरी पछाडिबाट उसलाई प्याट्ट पिट्थेँ, कपाल तानिदिन्थेँ । ऊचाहिँ सबैले देख्नेगरी प्रतिवाद गर्थी । सबैले बहिनीलाई छुच्ची देखे भन्ठानेर म रमाउथेँ ।
हामी दुवै जना ड्याडसँग सुत्थ्यौँ । जाडोमा म राति उसको खुट्टाबाट सिरक पन्छाइदिन्थेँ । गर्मीमा सिरक ओढाइदिन्थेँ । ड्याडी पाँच मिनेट बाहिर निस्केका बेला सिरकले मुख छोपेर अत्याइदिन्थेँ । नुहाउने क्रममा मम्मीले उसलाई टाउकोबाट पानी खन्याइदिँदा ऊ कहालिएको देखेर म ताली बजाउँथेँ ।
प्याट्ट टाउकोमा हिर्काएर थाहा नपाएजस्तो गरी सुत्थेँ । ऊ भुत आयो भनी डराएर ड्याडीको अँगालोमा लुकेर निदाउँथी । भुत आयो भनेर त मैले कति डर देखाएँ, देखाएँ । फाइदा पनि लिएँ, ‘मैले अह्राएको काम टेरिनस् भने भूत बोलाइदिन्छु ।’
ऊ पनि के कम, म निदाएको बेला उठेर ओछ्यानमा पानी खन्याइदिन्थी र ड्याडलाई पोल लगाउँथी, ‘डेडी हेर्नु त, दादाले ओछ्यान मुतेछ !’
अब खाइएन त रामधुलाइ ! ‘थुक्क गधा, यत्रो भएर पनि ओछ्यान मुत्न तँलाई लाज लाग्दैन ?’
म आफैँ छक्क पर्थेँ, ‘होइन, ओछ्यान मुतेको मैले कसरी थाहा पाइनँ ?’
म पनि के कम ! बहिनीले सधैँ चिया खाने गिलास आँगनतिर मिल्काइदिन्थेँ । रोई...रोई... भनेर जिस्काउँदा जिस्काउँदै उसलाई म रुवाइदिन्थेँ ।
मम्मीले गाली गर्नुभयो भने ऊ म नभएको मौका छोपेर मेरो स्कुल जाँदा लाउने सर्ट भुइँमा राखेर कुल्चिदिन्थी । ड्याडीको काखमा बसेर कहिले जिब्रो निकालेर त कहिले चोर औँलाले आँखा तानेर देखाउँथी । म खुब रिसाउथेँ । त्यो हेरेर ऊ मज्जा लिन्थी ।
ड्याडले उसलाई खुब माया गर्ने, उसले भनेका कुरा पनि पत्याउनुहुन्थ्यो । किन नपत्याउनु त, उसले प्राय: सत्य नै त भनेकी हुन्थी । ढाँट त मै थिएँ ।
आज त्यो दिनको याद आइरहेको छ, जुन दिन मैले पहिलो पटक बहिनीलाई पिट्ने योजनासँगै बाँसको चार फिट लामो सिर्कनो बनाएको थिएँ
त्यस बेला ऊ ६ वर्षकी थिई । कालीकाली, क्युट थिई । अनुहार डोलो थियो, पुक्कपुक्क गाला । सानैदेखि खाइलाग्दी । सबैले भन्थे, ‘यो पुन्टुङपुन्टुङ हिँड्दा त गुडियाजस्तै देखिन्छे ।’
माया गरी बोलाउँदा म ‘नानी’ भन्थेँ । रिसाउँदा ‘लिखे’ भन्थेँ । उसको नाम निशालाई बिगारेर म लिखे बनाइदिएको थिएँ । अरु जे भने पनि नरिसाउने ऊ लिखे भन्दिएपछि चाहिँ रुन्थी । अनि म चित्त बुझाउथेँ ।
‘यसले मेरो कुरा लगाएर जहिल्यै गाली खुवाउँछे । आज बाउ बाहिर मात्रै जाऊन् न, यसलाई सिर्कनै सिर्कनाले हान्छु’, मेरो योजना बन्यो ।
नभन्दै ड्याडी भैँसीलाई राँगा लाउन खोरियातिर जानुभयो । मम्मी खेतालालाई खाजा लिएर खेततिर । शनिबारको दिन, घरमा दाजुबहिनी मात्र थियौँ ।
म बाँसको सुरिलो सिर्कनो छेउमा राखेर दलानको बेञ्चमा उपरखुट्टी लगाई शानका साथ बसेँ । ‘ओए लिखे यहाँ आइज’, मैले आदेश दिएँ ।
कम बाठी थिई र ! उसले थाहा पाइसकेकी थिई- अब दाइको कुटाइबाट मलाई जोगाउने कोही छैन, आफैँ जोगिनुपर्छ ।
काठे भर्‍याङबाट बामे सर्दै तल झरी र भनी, ‘दादा, दादा ! मृदुलाले तपाईंको हालखबर पो सोध्दै थिई त ।’
मैले हत्तपत्त खुट्टा तल झारेँ, सिर्कनो लुकाएँ र टाउको ऊतिर बढाएँ, ‘अरु के सोधी भन त नानी ?’
म सरकारी विद्यालयमा पढ्थेँ । बहिनी बोर्डिङमा पढ्थी । बहिनीलाई पुर्‍याउन जाँदा उसको बोर्डिङका सिनियर केटीहरूसँग आँखा जुधाएर साँझको कल्पना तय गर्थेँ । तिनै सिनियरमध्येकी एक थिई, मृदुला ।
‘अरु त केही भनिन’, बहिनीले जवाफ दिई ।
‘भोलि के भन्छे, मलाई सुनाउनु है’, त्यसपछि मैले बहिनीलाई चेतावनी दिएँ, ‘तर, यो कुरा ड्याडलाई भनिस् भने तँलाई के गर्छु फेरि बुझिराख्नू ।’
अब सिर्कनो चलेन ।
साँझमा खाना खाइसकेपछि ड्याडको काखमा बसेर उसैगरी पोल सुनाइहाली, ‘यसले मलाई कुट्न लट्ठी बनाएको छ’, ‘मलाई लिखे भनेर बोलायो ।’
उसका कुरा सुनेर कहिलेकाहीँ त बाउले मलाई गाली मात्र होइन, जमाएर बाघे झापु पनि दिन्थे । मनले योजना बनाइहाल्थ्यो, ‘पख्, बाउ कतै जाऊन् न मात्रै, तेरो ढाड सेकाउँछु ।’
म मात्र भएको बेला खुब मायालाग्दी हुन्थी ऊ । मेरो कम्मर कम्मर त थियो हाइट, पुन्टी थिई । मामाघरकी हजुरआमाले उसलाई ढोई भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो ।
म मात्र भएकाे बेला ऊ ‘दादा’ पनि यति मलिन स्वरमा भन्थी कि पिट्न लौरो उज्याइसक्दासमेत उसको मायालाग्दो अनुहार देखेर मेरा हात रोकिन्थे । अनि अँगालो हालेर म भन्थेँ, ‘मेरी प्यारी नानी ।’
अलिक ठूली भएपछि ऊ केही बदलिई । अब उसले लगाउने पोलहरू पनि फरक हुन थाले । ‘डेडी, दादा रातभरि कोसँग फोनमा बोलिरहेको हुन्छ’, ‘दादा आज स्कुल नगएर फिल्म हेर्न गएको रे’, ‘गँजडी केटाहरूसँग हिँड्छ ।’
फेरि ड्याडममबाट लुकाउनुपर्ने कुरा कसरी हो उसले थाहा पाइहाल्थी । अर्थात्, उसलाई मेरा ती कुरा पनि थाहा हुन्थ्यो, जो मैले उसँग कहिल्यै सेयर नै गरेको छैन ।
अलिक ठूली हुँदै गएपछि ऊ मसँग फाइट नै खेल्न थाली । कहिलेकाहीँ मैले रिसले ढाडमा एक झापट हानेँ भने उसले पनि एक झापट हान्थी । एक भए पनि बढी झापड हान्ने ध्येयले म फेरि दुई झापट हान्थेँ र अबचाहिँ भयो है भन्थेँ । उसले पनि मलाई दुई झापड नै हान्थी, 'ल अब बराबर भयो ।' चाहे विस्तारै किन नहाेस्, मैले जति झापट हानेकाे छ, त्यति नै उसले पनि हान्नैपर्ने ।
मैले एकै झापड बढी हानेर भागेँ भने लडीबडी गर्दै रुन्थी । अनि ड्याडले मलाई समात्नुहुन्थ्यो र उसको अगाडि राखेर ढाड थपाइदिनुहुन्थ्यो । एक झापड बढी हानेपछि रुँदा बिग्रिएकाे उसको मुखमा अचानक मुस्कान उदाउँथ्यो । जबकि, त्यस बेलासम्म आँखा आँसुले नै भरिएका हुन्थे ।
तर, अचम्म ! कालान्तरमा ड्याडबाट पिटाइ खाने खालका मेरा गल्ती उसले सुनाइदिन छाडी । एक पटक ठूलाे मम्मीको छोरा सरोज र ठूलो मामाको छोरा धिरजसँग फाइट पर्‍यो । केटाहरूले जीउभरि छिथोरेर रक्ताम्य बनाइदिएका थिए । फाइट र मेरो चोट देख्ने बहिनी मात्र थिई ।
फाइट खेलेको कुरा ड्याडले थाहा पाए, झनै पिट्ने । मलाई लाग्यो– नारदले थाहा पाएपछि बाउले थाहा नपाउने कुरै भएन । अब आज कुटाइ खाइन्छ भनेर जीउलाई तयार गरेर राखेको थिएँ । तर, बहिनीले मम्मीलाई भनेर तातोपानी र पट्टी लिएर आइछे । दुई जनाले मेरो इलाज गरिदिए ।
भागेर फुटबल खेल्न जाँदा बेलुका ड्याडको आदेश हुन्थ्यो, ‘यसलाई आज खान नदिनू ।’
ड्याड निदाएपछि नानी एक हातमा आम्खाेरा र एक हातमा थाल बोकेर म भए ठाउँमा आउँथी । म सुँक्कसुँक्क रोइरहेको हेरेर ऊ दुःखी हुन्थी ।
एक पटक खेल्दाखेल्दै साथीहरूसँग झगडा पर्‍यो । अलि ठूला केटासँग झगडा परेकाले मैले कुटाइ खानेवाला थिएँ । त्यस बेला मेरी बहिनी मेरोतर्फबाट उनीहरूसँग भिडिरहेकाे देखेँ । ऊ सकी नसकी ढुंगा हातमा लिएर भन्दै थिई, ‘मेरो दादालाई कुटेर मात्र हेर त, तिमेरुलाई यही ढुंगाले हान्छु ।’
ती केटा ढुंगाले हान्छे भनेर हामीदेखि भागेका थिए ।
२० वर्षको थिएँ होला । सिगरेटको ठुटा ल्याएर घरमा कोही नभएको बेला तान्दै थिएँ । त्यही बेला बोर्डिङबाट घर आइपुगेकी बहिनीले देखिहाली । ‘रामराम पख्’, उसले चोर औँलाले चेतावनी दिई । मेरो सातोपुत्लो उड्यो । तर, यो कुरा उसले ड्याडलाई सुनाइन । बरु यसलाई लिएर उसले मसँग बार्गेनिङचाहिँ थुप्रै गरी, ‘मलाई २० रुपैयाँ दे, नत्र तेरो भण्डाफोर !’, ‘मलाई साइकलमा राखेर बोर्डिङ पुर्‍याइ दे, नत्र... !’, ‘तेरो गिलासमा राखेको छाली मलाई दे, नत्र...!’
त्यसपछिका धेरै गल्तीहरू, जो मैले गरेको थिएँ, त्यो ड्याडसम्म पुर्‍याइन । बरु मलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी बार्गेनिङचाहिँ गरी नै रही ।
मम्मीको नजरमा हामी ‘कुकुरबिराला’ नै थियौँ । ड्याडचाहिँ स्पष्ट रूपमा बहिनीतिर लागेर मलाई गाली गर्नहुन्थ्यो, ‘सानी बहिनीलाई सम्झाउँछन् कि डाँट्छन् ?’
तर, मम्मी दुवै जनालाई गाली गर्ने, ‘यी कुकुरबिराला कोहीभन्दा कोही कम छैनन् ।’
हुन पनि, झगडाकाे कुनै बहाना नै मिलेन भने कसैले नदेख्ने गरी म उसकाे टाउकाेमा प्याट्ट कुटिदिन्थेँ । कहिलेकाहीँ बहिनी परैबाट जिब्राे टाेक्दै मलाई जिस्काउँथी । यसपछि त टपिक बनिहाल्याे नि !
मामाघरअगाडि सडक किनारामा एउटा बयरको बुढो रुख थियो । सिजनमा लटरम्म फल्थ्यो । त्यसमा झट्टारो हानेर हामी बयर झार्थ्यौं । उसैगरी एक दिन बयरमा झट्टारो हान्दै थिएँ, बहिनीचाहिँ झरेको बयर आफ्नो प्लास्टिकमा सँगाल्दै थिई ।
अचानक हुइँकिएर आएको एउटा रातो गाडीले उसलाई ठक्कर दियो । ऊ सडकको तल्लोपट्टि बजारिई । म अत्तालिएर बहिनीतिर गएँ । उसले आँखा चिम्लिएकी थिई । हातमा बयर भरिएको प्लास्टिक उसैगरी समातेकी थिई । ‘नानी, नानी ! आँखा खोल न, एक पटक हेर न । उठ न नानी !’ म डाको छाडेर रुन थालेँ ।
‘मेरी बहिनी ! दादासँग बोल न । आँखा खोल न । ड्याड, मम्मी के भयो बहिनीलाई !’
‘दादा ! के भयो ? म यहाँ छु त । किन रो’को ?,’ सानी नानीले मेरा गाला आफ्ना हातले सुम्सुम्याई र हातमा समाती । भनिन्छ, बहिनी त्यो साथी हो, जसले थाम्छे त हात, तर स्पर्श मनलाई गरिरहेकी हुन्छे ।
वास्तवमा निदाएकी ऊ थिइन, म थिएँ । त्यो भयङ्कर सपनाले मभित्र बहिनीप्रतिको माया थप प्रस्फुटित गरिदियो । अब कुनै पनि बेला मलाई ऊप्रति रिस उठ्नेबित्तिकै त्यो सपना झल्यास्स मानसपटलमा आउँथ्यो । म उसलाई सताउनचाहिँ सताउँथेँ । तर, धेरै बेर दुःखी देख्न सक्दिनँ थिएँ ।
बुझ्ने भएपछि मेरी बहिनी मलाई तपाईं भन्न थालेकी छे । तर, बार्गेनिङ गर्न भने छाडेकी छैन, ‘भाइटीकामा २ हजार भएन भने डेडीलाई तपाईंको फोन चेक गर्नू भनिदिन्छु ।’
म पनि के कम, टीका लगाएर ३ हजार नै दिन्थेँ । एकछिनपछि फकाएर भन्थेँ, ‘नानी, तिम्रो २ हजार मलाई देऊ, म डाइसमा जितेर डब्बल फिर्ता गर्छु ।’ ऊ लोभिएर पैसा दिन्थी ।
दुःखको कुरा, मैले त्यसरी बहिनीसँग लिएको पैसा फिर्ता गरेको रेकर्ड अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।
तर, अन्य उपायबाट उसले पैसा त असुल्छे नै ।
कहिलेकाहीँ वालेट लुकाइदिन्थी अनि बार्गेनिङ गर्थी, ‘मैले भेटिदिएँ भने कति रुपैयाँ दिने हो, नत्र म खोज्न सहयोग गर्न सक्दिनँ ।’
फोन चार्जमा राखेका बेला केटीहरूको मेसेज स्क्रीनसट गरेर आफूलाई पठाउँथी र युट्युबरको हेडलाइनजस्तो चेतावनी दिन्थी, ‘केटीहरूसँग मस्किँदै गरेको च्याट बाउले थाहा पाएपछि...!’ ‘पढ्न छोडेर लभ गर्दै हिँड्ने छोरालाई बाउले गरे रामधुलाइ..’
अ हो ! यसपछि त सौदा गर्नैपर्‍यो । यस्तो चेतावनी दिएर उसले मलाई भाततरकारी पकाउनेदेखि भाँडा माझ्नेसम्मका काम धेरै पटक लगाई ।
मेरा लागि अर्को डरलाग्दो कुरा के भने- शायद पोहोर नै हाे, बियर खाँदै गरेको मेरो फोटो उसले खिचेकी छे । त्यो फोटोलाई लिएर मैले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
मलाई थाहा छ, उसले यो कुरा ड्याडसम्म पुर्‍याउँदिन । तर, मलाई उसको बार्गेनिङ साँच्चै मन पर्छ । उसलाई सताउन र ऊबाट सताइन रमाइलो लाग्छ । त्यसैले त ‘मेरो ज्यान’ भन्ने गर्लफ्रेण्ड होस् नहोस् तर ‘ओए हिरो’ भन्ने एक बहिनी हुनैपर्छ ।
हरेक वर्षको भाइटीकाको दिन परीजस्तै चिटिक्क बन्थी ऊ । आज के गरेकी होली ? १५ दिनअगाडि त फोनमा रुँदै थिई, ‘यसपालि कसले दिन्छ मलाई ३ हजार अनि कहिल्यै फिर्ता नगर्ने गरी कसले माग्छ २ हजार सापटी ?’
आज उसले मलाई फोन गर्न सक्ने छैन । म पनि उसलाई फोन गर्न सक्ने छैन ।
मैले सेल्फी लिने बेला यताउताबाट दौडिँदै क्यामेराअगाडि दाँत देखाएर मलाई वाक्क लगाउने छैन । भाइटीका लगाइसकेपछि उसले फोटो खिच्दिनँ भन्दा म उसको फोटो खिचेजस्तो गरेर सेल्फी हान्न पाउने छैन । मैले यसरी नै अरु केही वर्ष यहाँ गुजार्नुपर्नेछ ।
मेरा आँखाका कुनाबाट बेदनाहरू आँसु बनेर पोखिए, थाहै नपाई ।
‘लामा आता मफ्रियाली कोलजमान ?,’ अमेलिया अगाडि आएर झ्वाँक्किई ।
‘किन मलाई यसरी सताइरहेको ?,’ अनुवाद गर्दै देव हाँस्यो ।
सी अफ ग्यालिलीतिर एकोहोरिएको म आँसु पुछेर ऊतिर फर्किएँ र भनेँ, ‘स्लिखा ! आनी लो ओस्से अताेदाबार का जे ओदपाम् । जे अखरोन !’ माफ गर, म फेरि यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउँदिनँ, यो नैै अन्तिमपट’ हो', देवले फेरि गिज्यायो, ‘अ हो, अस्तिकै माफी कपी पेस्ट !’
म मौन उभिएँ ।
ओके बिसेदर ! लामा आता आचुब् माकारा ?,’ उसले म निराश हुनुको कारण सोधी ।
‘नाजीहरूमा पनि भावना हुन्छ कि क्या हो ?,’ आज देव जिस्किने मुडमै छ ।
‘चुप लाग मुला ! को नाजी ?’, मैले उसलाई गाली गरेँ, ‘तँ खुरुक्क यहाँबाट जान्छस् कि जाँदैनस् ?’
अमेलियालाई मैले तिहारको महत्त्व र विशेषताबारे वर्णन गर्दै भने, ‘आनी मित्गागात् ला आखोत सेली’ अर्थात् ‘मलाई बहिनीको याद आइरहेछ ।’
क्रिश्चियन धर्म मान्ने उसले मलाई दाइ मानेर टीका लगाइदिने प्रस्ताव गरी, ‘आनी मासीम्लाख् सिमानित । चेवा आनी क्मो आखोत् सेल्खा आल्तिदाग हिए, अकोल बिसेदर ! अर्थात्, ठीकै छ । तिमी चिन्ता नगर । म पनि तिम्रो बहिनीजस्तै हो । म लगाइदिन्छु टीका ।’
मैले हाम्रो गाउँका नवक्रिश्चियन गौतम भेनालाई सम्झिएँ, जो दसैँमा टीका लगाएकाहरूलाई आफ्नो घर छिर्न दिँदैनन् । तिहारमा देउसीभैलो खेल्न आउँछन् भनेर बेलैमा बत्ती निभाएर सुत्छन् ।
‘ह्वास डेंक्स्ट डू गेराड ?’, ट्युन प्रश्नवाचक थियो । तर, मैले बुझेको भए मरिजाऊँ ।
‘जे सफा जर्मन’, यो जर्मन भाषा रे ! ऊ हाँसी, ‘मा आता खोसेब ?’ अर्थात्, ‘के सोचिरहेका छौ ?’
जे होस्, अमेलियासँग मेरी बहिनीका केही विशेषता मिल्छन् । ऊ छिट्टै रिसाउँछे, छिट्टै साम्य हुन्छे । उसमा बार्गेनिङको गुण पनि छ । मैले उसको गमला फोहोर गरेकाे बेला मेरो कलेज डाइरेक्टरलाई पोल सुनाइदिने चेतावनी दिँदै सर्तहरू राख्थी, ‘सब्बात (बिदाको दिन) सँगै बसेर वाइन खानुपर्ने, घण्टौँसम्म उसका कुरा सुनिदिनुपर्ने ।
केटाहरूसँग बसेर बियर खाँदै कलेजका केटीको कुरा काट्नजस्तो मज्जा कहाँ आउँथ्यो मलाई ऊसँग बस्नमा । म आङ तान्थेँ ।
छतमा उसैगरी आकाशका तारा हेर्दै ऊ मलाई आफ्नो परिवारका बारेमा सुनाउँथी । जर्मनीको ‘ज’ पनि उच्चारण गर्न उचित नठान्ने देशमा आएर ऊ बस्नुको कथा पनि निकै लामो र बेदनायुक्त थियो । म अब्बासी लिँदै सुन्थेँ, त्यहीँ निदाउँथे ।
फोनको घण्टी बज्यो । बहिनीले गरेकी थिई, ‘दादा...! शायद ऊ यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ । ड्याड बोल्नुभयो, ‘तिमेरुको माया पनि बुझिनसक्नु छ, सँगै हुँदा झगडा गरेर हामीलाई नै वाक्कदिक्क बनाउँछौ । बहिनी रुँदै छे, सम्झा है !’
‘मेरी बहिनीलाई आउँदा भाइटीकाको गिफ्ट ल्याइदिन्छु, मोबाइलबाट मेरो फोटो डिलिटचाहिँ गरिदिनुपर्छ,’ बल्ल ऊ हाँसेको आवाज सुनेँ । सम्झिँए, ‘ऊ उसैगरी हाँसी होली, जसरी मेरो ढाडमा एक झापट बढी हान्न पाउँदा रुँदारुँदै मुस्कुराएकी थिई ।’
९ नोभेम्बर २०१५ बिहानको कलिलो घाम चर्किइसकेको छ । घरको फोन र अमेलियाको प्रस्तावले मन केही हल्का भयो ।
‘तोदा राब्बा !’ (धन्यवाद) म अमेलियाको पछिपछि उसको अपार्टमेन्टतिर लागेँ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १, २०७७, ०७:३०:००